Sidee ciidanka Soomaaliya u badbaadiyeen diyaaraddii laga soo afduubtay Jarmalka? (Qaybta 2-aad) - Muraayad
Home Nolosha Sidee ciidanka Soomaaliya u badbaadiyeen diyaaraddii laga soo afduubtay Jarmalka? (Qaybta 2-aad)
Sidee ciidanka Soomaaliya u badbaadiyeen diyaaraddii laga soo afduubtay Jarmalka? (Qaybta 2-aad)
Kusoo dhawaada qaybtii 2-aad ee maqaalkii aan uga hadleynay Afduubkii diyaaraddii Lufthansa ee ay gacanta ka gaysteen militariga Soomaaliya.
Howgalka lagu badbaadiyay diyaaraddii afduubneyd ee Muqdiho ka dhacay 1977-kii waxaa guushiisa si weyn loogu amaanay dowladda Soomaaliya.
Sida aan ku sheegnay qabtii hore, diyaaradda la qafaashay ee lambarka duullimaadkeedu ahaa 181 waxaa lasoo dul mariyay magaalooyin dhowr ah oo la damcay in lagu dajiyo.
Dhammaan meelihii kale ee loo jiheeyay waa laga diiday in ay ka caga dhigato, dal kasta oo lagu leexiyayna wuxuu ku gacan seyray codsigii loo gudbiyay, maadaama ay suuragal ahayd in meesha diyaaradda la geeyo uu ka dhaco xasuuqa rabaabka ama in la aqbalo dalabka afduubeyaasha.
Waxaa kale oo mar walba iska caddeyd in isla goobta diyaaradda la geeyo laga fulin doono howlgal aan la saadaalin karin waxa ka dhalan kara.
Dowladda Jarmalka ayaa heegan ugu jirtay in ay ciidamo deg deg ah geyso meeshii ay noqotaba. Tusaale ahaan, waxaa ciidanka kumaandooska lasii geeyay dalalka Qubrus iyo Iiraan oo labaduba ay macquul ahayd in diyaaradda laga dajiyo.
Kaddib waxaa kumaandooska loo gudbiyay magaalada Ankara ee dalka Turkiga, halkaas oo ay ku sugayeen amar.
Markii ay burcadda diyaaradda gacanta ku hayay ogaadeen in kumaandoos lagu diyaariyay Ankara waxay isla markiiba dalbadeen in ciidankaas dibloogu celiyo Jarmalka. Waa laga ogolaady, warbaahinta Jarmalka ayaana shaacisay in kumaandooskii lagu celiyay waddankooda.
Ha yeeshee, waxayna ka warqabin in guuto kale oo kumaandoos ah ay kala joogeen dhinaca bari ee badda Mediterranean-ka iyo waddanka Iiraan.
Markii diyaaradda la wareejiyay ilaa 6,000 oo meyl, waddan ku deeqa in lagu soo dajiyana uu soo bixi waayay, ugu dambeyn dowladda Soomaaliya ayaa si geesinnimo leh u oggolaatay in diyaaraddaas laga dajiyo Muqdisho, durbana waxaa la diyaariyay ciidan gaar ah.
Markii lasoo gabagabeeyay howlgalka badbaadinta ee lagu dilay dhammaan afartii afduubeyaal, waxaa ku xigay hambalyadii loo soo dirayay Soomaaliya.
Afhayeenka dowladda Jarmalka Klaus Bolling ayaa sheegay in mid ka mid ahaa rakaabkii diyaaadda oo daal badan ka cabanayay lagu daweeyay isbitaal ku yaalla Muqdisho.
Wuxuu sheegay in rakaabkii kalena dhakhaatiir caafimaadkooda eegta loogu geeyay garoonka dhexdiisa.
Sidoo kale afhayeenka ayaa warbaahinta ka hor aqriyay Bayaan ay si wadajir ah usoo saareen xukuumadda iyo hoggaamiyeyaasa xisbiyada ee baarlamaanka Jarmalka.
Bayaankaas waxaa mahad iyo amaan ballaaran loogu jeediyay dowladda uu madweynaha ka ahaa Maxamed Siyaad Barre.
“Haddii aan oggolaansho buuxda iyo caawinaad laga heli lahayn mas’uuliyiinta Soomaaliya, ma suuroobi lahayn howlgalka militari lamana badbaadin lahayn dadka rabaabka ah,” ayaa lagu yiri bayaanka.
Hoggaamiyaha Jarmalka Helmut Schmidt ayaa warqad telegram ah oo uu Siyaad Barre usoo diray kusoo qoray: “Waligeen ma illoobi doonno abaalka aad noo gasheen,” sida uu sheegay Mr Bolling.
Jarmalka ayaa caddeeyay in marnaba aysan ka fikirin fulinta dalabka afduubeyaasha ee ahaa in loo sii daayo 11-ka qof ee ka xirnaa.
Previous article9 talo oo kaa badbaadinaysa dhibaatada Internet-ka
Next article4 mucjiso oo ay leedahay Toonta, faa’iido weynna inoo leh